Ilala hadal TokBox | Martech Zone
La hadal ila TokBox
Monday, May 17, 2010 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Ball Lorraine
Anigu waxaan ahay geek suuq geyn ah, sidaa darteed waan ku faraxsanahay markii tikniyoolajiyad cusub ay timaado taas oo caawin karta macaamiishayda. Waxaan saacado ku qaataa diiwaangelinta, iyo tijaabinta adeegyada cusub. Waxaan qabaa TokBox waxay noqon kartaa qalabkeyga cusub ee aan jeclahay.
Waxaa isoo baray adeegga qareenkeyga. ( Haa waan haystaa qareen, oo si ka sii fiican, isagu waa qareen cilmiga farsamada). Waxaan u diray qandaraas uu dib ugu eego, halkii uu igu celin lahaana dukumiinti dheer oo 2 - 3 bog ah, oo aanan sinaba u aqrin doonin, wuxuu ii soo diray muuqaalkan. Markuu lahadlayey Matt, wuxuu qirtay inuusan u adeegsan doonin qalabkan macmiil kasta. Macaamiisha qaar ayaa doorbidi doona, ama u baahan dukumiinti qoraal ah, laakiin kuwa aan sidan sameynin waa hab dhaqso badan oo wax ku ool ah oo lagula xiriiro.
Marka laga eego dhanka bixinta adeegga, duubista fiidiyowga ayaa ka dhaqso badan, ka dib garaacista ama sugida xoghayaha inuu qoro jawaabta sidaa darteed waxaan ku helay jawaabteyda qaab aan jeclahay, Mattna wuxuu u dhaqaaqi karaa macmiilkiisa xiga.
TokBox waxay leedahay astaamo dhowr ah oo aan runtii ka helay:
Waa bilaash - Haa waxaa jira casriyeyn iyo astaamo horumarsan oo lagu heli karo lacag, laakiin xirmada aasaasiga ah waa mid dhameystiran
Waxaan kaga jawaabi karaa fiidyow, cod, emayl ama wicitaan taleefan oo isku shaashad ah
Waxyaabaha lagu wada hadlo ee codka iyo muuqaalka ah waxaa lagu heli karaa qiimo macquul ah: $ 9.99 / bishii loogu talagalay wada sheekaysiga yar. $ 18.99 loogu talagalay wadahadal ku lug leh in ka badan 200 oo qof. Tani waa beddelka qiimaha wax ku oolka ah ee websaydhka
Maxaan ugu faraxsanahay arrintan?
Anigu waxaan ahay nin hadlaya, ma ahan qoraa, markaa tani runti aniga way ii qurux badan tahay sidii aan ula xiriiri lahaa rajada iyo macaamiisha.
Waxaan rajeynayaa inaan ku daro fiidiyow qayb ka mid ah ololaheena socda, halkaas oo aan ku beddeli doono, fiidiyow, maqal iyo emayl dhaqameed
Isku xirnaanta adeegsadaha ayaa aad ugu fudud xayeysiiyaha iyo macaamiishooda labadaba. Waxaa i soo gaadhay emayl fudud, waxaan dhagsiiyey xiriirka iyo barnaamijka la bilaabay. Waxay u baahan tahay khibrad MAYA iyo tiro ka mid ah macaamiishayda, khibrad lahayn waa muhiim.
Maxaad ku qaban kartaa TokBox? Waxaan u maleynayaa in jawaabta ay kuxirantahay mala’awaalkaaga. Haddii aad u isticmaasho waxaan jeclaan lahaa inaan arko shaybaarrada waxa aad sameyneyso!
Tags: isku xidhkaraadinta bulshadaQoraalka
Sida loo doorto iibiyaha SMS / Text Fariin